02 Archives - Tameelay
လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထားဟာ ကံတရားပါ
လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထားဟာ ကံတရားပါ တစ်ခါက သူဌေးတစ်ဦးဟာ ခြံတစ်ခြံဝယ်လိုက်တယ်။ခြံထဲက အိမ်ကိုပြင်လိုက်တယ်။ ခြံနောက်မှာ နှစ်ချို့သစ်သီးပင်တွေရှိတယ်။ ဒီအိမ်ကိုဝယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက အဲဒီသစ်သီးပင်တွေကြောင့်ပါပဲ။ အဲဒီအသီးတွေကို သူဌေးကတော်ကြိုက်နှစ်သက်လို့ပါ။ အိမ်ပြင်နေချိန်အတွင်းမှာ မိတ်ဆွေတချို့က ဗေဒင်ဆရာခေါ်ပြီး ကံကြမ္မာကိုကြည့်ဖို့ သူဌေးကိုအကြံပေးတယ်။ သူဌေးက ဒါတွေကို အယုံအကြည်ရှိသူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေတွေကအကြံပေးတော့ ဗေဒင်ဆရာခေါ်ဖို့ စဉ်းစားလိုက်တယ်။ ဗေဒင်ဆရာက နာမည်ကြီးတစ်ဦးပါ။ဆရာကို အဝေးကြီးကနေ ပင့်ဖိတ်ပြီးဘူတာမှာ သူဌေးကိုယ်တိုင်သွားကြိုခဲ့ပါတယ်။ ဆရာ့ကိုခေါ်ပြီး အိမ်ကိုပြန်ရာလမ်းမှာသူဌေးဟာ သူ့ကားကိုကျော်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ ကားတိုင်းကို လမ်းဖယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ဗေဒင်ဆရာကတွေ့တော့ “ခင်ဗျားကားမောင်းတာ တော်တော်တည်ငြိမ်တာပဲ” လို့ဆိုတယ်။ သူဌေးက “ကားကျော်ဖို့ကြိုးစားသူတိုင်းဟာ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခု ရှိလို့နေမှာပါ။ သူတို့သွားလိုရာလမ်းမှာ အချိန်နှောင့်နှေးလို့မဖြစ်ဘူး” လို့ ရယ်ပြီး ပြောပါတယ်။ အိမ်နားရောက်ခါနီး လမ်းကျဉ်းတစ်ခုမှာ သူဌေးက ကားအရှိန်ကိုလျော့လိုက်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တစ်ယောက် … Read more
Categories General Knowledge Tags 02
ဝါတွင်းသုံးလ မေတ္တာသုတ် အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ချင်သူများအတွက်
၁။ နံနက်စောစောထ၍ ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီးလျှင်ဘုရားရှင်ရှေ့တော်မှောက်၌ ငါးပါးသီလ ခံယူပါ။ ၂။ ထို့နေ့အတွက် မေတ္တသုတ်ကို (၁၀၈) ခေါက်အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ခွင့်ပြုပါရန် ဘုရားရှင်ထံ လျှောက်ထား ခွင့်ပန်ပါ။ ၃။ ခွင့်ပန်ထားသည့်အတိုင်း အောင်မြင်အောင်ကျင့်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဘုရားရှင်ထံ၌ကတိပေး လျှောက်ထားပါ။ ၄။ သမန္တာ စက္ကဝါဠေသု မှစ၍ ရွတ်ဆိုပြီး နတ်ဗြဟ္မာတို့အား ပရိတ်တရားနာ ကြွပါရန် ဖိတ်ကြားပါ။ ၅။ ကရဏီယမတ္ထကုသလေနမှစ၍ မေတ္တသုတ်ပရိတ်တော်ကို စတင် ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ပါ။ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် နေ့စဉ် (၁၀၈) ခေါက်နှုန်းဖြင့် ရက်ပေါင်း (၁၀၈) ရက်အဓိဋ္ဌာန် ဝင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ် (၁၀၈) ခေါက်ကို ဘုရားရှေ့၌ တစ်ထိုင်တည်း အချိန်မပေးနိုင်ပါကနောက်နေ့မကူးမီ( တစ်နေ့တာအတွင်း ရသော အချိန်များတွင်) ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ-နံက်စောစော ဘုရားရှေ့၌ … Read more
Categories Buddha Words and Knowledge Tags 02
စိတ်အသစ်နဲ့နေပါ နောင်တတွေနဲ့မနေပါနဲ့ပြီးခဲ့တာတွေ…..ပြီးသွားပါပြီ…။ ဒီနေ့ဟာ အသစ်ပဲအသစ်က… ပြန်စပါ။ ဒီနေ့ကို …စိတ်ကောင်းကောင်းနဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေပါ…။ ဒီနေ့ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်ရင်မနေ့က စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုပြီးခဲ့တာတွေက ပြီးပြီလို့သဘောထားပါ…။ နေ့သစ်ကို…စိတ်သစ်နဲ့နေမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပါ…။ လူတစ်ယောက်ကို `မုန်း´မိတာသူ့ကို` ရှုံး´ သွားတာနဲ့အတူတူပဲ…။ သူတို့ထက် မသိမသာ သာနေတဲ့အခါမင်းကို မနာလိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဆပေါင်းများစွာသာသွားတဲ့အခါမင်းကို အားကျလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းမှာ လျှောက်စရာနှစ်လမ်းရှိတယ်။တစ်လမ်းကလျှောက်ကိုလျှောက်ရမယ့်လမ်း…နောက်တစ် လမ်းက ကိုယ်လျှောက်ချင်တဲ့လမ်း… မလျှောက်မနေ လျှောက်ရမယ့်လမ်းကိုလှလှပပလျှောက်ပြီးမှကိုယ်လျှောက်ချင်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်လို့ရပါလိမ့်မယ်…။ ဝိုးတဝါးဖြစ်နေတဲ့မနက်ဖြန်အတွက် စိုးရိမ်မနေပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ယခုအတွက်ပဲအစွမ်းကုန်ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်စမ်းပါ…။ ဒါကြောင့် နေ့အသစ်မှာ“စိတ်အသစ်´´နဲ့နေပါသူငယ်ချင်း…။ တောသားရဟန်း စိတ္အသစ္နဲ႔​ေနပါ ​ေနာင္တ​ေတြနဲ႔မ​ေနပါနဲ႔ၿပီးခဲ့တာ​ေတြ…..ၿပီးသြားပါၿပီ…။ ဒီ​ေန႔ဟာ အသစ္ပဲအသစ္က… ျပန္စပါ။ ဒီ​ေန႔ကို …စိတ္​ေကာင္း​ေကာင္းနဲ႔စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ​ေနပါ…။ ဒီ​ေန႔ကိုအ​ေကာင္းဆုံးျဖစ္ခ်င္ရင္မ​ေန႔က စိတ္မ​ေကာင္းျဖစ္ခဲ့တာ​ေတြကိုၿပီးခဲ့တာ​ေတြက ၿပီးၿပီလို႔သ​ေဘာထားပါ…။ ​ေန႔သစ္ကို…စိတ္သစ္နဲ႔​ေနမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ပါ…။ လူတစ္​ေယာက္ကို `မုန္း´မိတာသူ႔ကို` ရႈံး´ သြားတာနဲ႔အတူတူပဲ…။ သူတို႔ထက္ မသိမသာ သာ​ေနတဲ့အခါမင္းကို မနာလိုျဖစ္လိမ့္မယ္။ အဆ​ေပါင္းမ်ားစြာသာသြားတဲ့အခါမင္းကို အားက်လိမ့္မယ္။ … Read more
တနင်္ဂနွေ ယခုကာလအတွင်း ဆုံးရှုံးမည်ဟုထင်ထားသော ငွေကြေးကိစ္စ၊ လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် ပြန်လည်၍ အခွင့် အရေးပေါ်ပေါက်မည့်ကာလဖြစ်သည်။ သင်သည်ငွေကြေးကံ ထူးထူးခြားခြား ကောင်းမွန်နေတတ်ပြီး ကြံစည်ကြိုး ပမ်းမှုတွေမှာ အလွယ်တကူ ပြည့်ဝအောင်မြင် လာပါလိမ့်မည်။ ကံကောင်းတိုးတတ်မှုများ ပြန်လည်ဖေါ်ဆောင် နိုင် ပြီး အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးများ မိမိနှင့် မိသားစုလက်ဝယ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းတွင် အတိုက်အခံလျော့ပါး၍ ကူညီစောင့်ရှောက်မည့်သူများဖြင့် ဆုံတွေ့ခွင့်ရှိမည်။ မိသားစုခရီးဝေးများ၊ အလုပ်ကိစ္စများ အတွက် ခရီးဝေးများ သွားလာရပြီး အကျိုးရှိမည်။ ထီကံစမ်းသင့်သောကာလဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတစ်ဦးဦးနှင့် စပ်ထိုးစေချင်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများတရားမဝင် ငွေကြေးလာဘ်ထိုးတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ လက်မခံလိုက်ပါနဲ့။ ကောင်းနေတဲ့ကံလေးညံ့သွားတတ်ပါတယ်။ပညာသင်ကြားနေသူများ လုံ့လဝီရိယအကျိုးခံစားရမည်။ ဆရာကောင်း ရဲ့အနီးကပ်သင်ပြခြင်းကိုခံရမည်။အိမ်ထောင်ရှင်များ အလုပ်ကိစ္စနှင့်အိမ်တွင်းရေး အဆင်ပြေသဖြင့် အေးချမ်းတည် ငြိမ်မည်။ချစ်သူများမိမိတို့၏အချစ်ခရီးအတွက်အကောင်းဆုံးဖန်တီးခွင့်ရရှိမည်။နှစ်ယောက်အတူငွေစပြီး စုဆောင်း တာမျိုးတွေလုပ်စေချင်ပါတယ်။ အကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၅/၈ အထူးဟော လုပ်ငန်းစီးပွား … Read more
Categories Uncategorized Tags 02
ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်နေ့ (ဓမ္မစကြာနေ့မှ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့) အထိ ရက်ပေါင်း( ၉၀ ) ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်နေ့ (ဓမ္မစကြာနေ့မှ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့) အထိ ရက်ပေါင်း(၉၀)တိတိစိပ်ရပါမယ်ရှင်သက်သတ်လွတ်လည်းစားစရာမလိုပါဘူးရှင်စားနိုင်သူကတော့ ပိုထူးခြားပါတယ်နော် အချိန်လည်းတိတိကျကျစိပ်စရာမလိုပါဘူးနော်နေ့တိုင်းမှန်မှန်စိပ်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှင့်ပုတီးစိပ်ရမယ့်နေ့ရက်များ 3.. 8 . 2020. မှ11. 8 . 2020 အထိ ဂုဏ်တော် ( ၉)ပါးစလုံးကိုနေ့တိုင်းတစ်ပတ်စီပါနော် အရဟံ (၁)ပတ် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ (၁)ပတ် ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော (၁)ပတ် သုဂတော (၁)ပတ် လောကဝိဒူ (၁)ပတ် အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ (၁)ပတ် သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ (၁)ပတ် ဗုဒ္ဓေါ (၁)ပတ် ဘဂဝါ (၁)ပတ် 3.. 8 . 2020. မှ11. 8 . 2020 အထိ 12.8 .2020 … Read more